Top News: Qorshihii Axmed Madoobe la damacsana Barre Hiiraale oo fashilmay iyo Gudigii Xamar ka yimid oo niyad jab ka jooga Maamulka Axmed Madoobe. |
Top News: Qorshihii Axmed Madoobe la damacsana Barre Hiiraale oo fashilmay iyo Gudigii Xamar ka yimid oo niyad jab ka jooga Maamulka Axmed Madoobe.
Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose waxaa maalmihi la soo dhafay ka tagnaa arin muran badan iyo tuun dhalisay.
Arinkaan ayaa waxaa uu yahay Hub Ciidamada Kenya ay ka qaade Ciidamo ka soo jeeday beesha Sade oo ku sugnaa Garoonka Diyaaradaha ee Kismaayo iyo hub kale oo laga qaday Ciidamo aan badnayn oo dhawaan ka soo gostay Gobweyn ku wareejiyeen Axmed Madoobe.
Ciidamada Kenya marki ay maleshiyaadkaasi hubka ka qaadayeen waxaay sheegen in ay Amisom hubkaasi masul ka tahay loguna imanayo balse taasi waxaay benowday ka dib markii 100 Askari oo ka soo jeeda Beesha Sade loguna tala galay in ay wax ka sugan Amaanka Kismaayo hubkoodina ay hayeen Ciidamada Kenya laga wayay.
Sarkaalka Ugu sareeya Ciidamada Kenya ee ku sugan Magaalada Kismaayo ayaa waxaa uu gudiga nabadeynta ee laga soo diray Magalaada Muqdisho u sheegay in Amisom aysan hayn wax hub ah islamarkana hubkii ay beesha Sade k qaday ku warejisay Axmed Madoobe.
Arinka intaasi kuma jogsane Saraakiil iyo Siyaasiyin ka soo jeeda Beesha Sade ayaa Axmed Madoobe hoygiisa Kismaayo ugu tagay waydiiyayna in Amisom ay ku wareejisay Hub ay beesha Sade lahayd kaas oo laga qaday Ciidamo ka soo gostay Gobweyn iyo kuwa horay ugu sugnaa Garoonka Kismaayo.
Axmed Madoobe ayaa ku jawaabay haa Amisom Kenya hubkaasi way isoo garsiisay gudigii ayaa waxaa Axmed Madoobe ka dalbadeen in hubkaasi lagu wareejiyo Ciidamadii laga qaday oo hada tababar dhamaystay qayb na ka noqonaya 260 Askari oo logu tala galay sugida Amanka Kismaayo.
Axmed Madoobe ayaa gudigiii ugu jawabay in hubkaasi uu u qaybiyay Maleshiyaad ka soo jeeda Beeshiisa kuwaas oo ayagana u hada tababar uga socdo Duleedka Kismaayo.
Axmed Madoobe ayaa waxaa uu intaasi ku daray in Ciidamada tababarka dhamaystay ee ka mid noqonaya 260 askari ee amanka Kismaayo sugaysa qaybta ka soo jeeda beesha sade lo bahan yahay in ay hub ka dalbadan Raisalwasaraha Somalia Dr Abdiweli Sheikh Axmed.
Dhacdadan ayaa waxaa si weyn loga hadal haya Magaalada Kismaayo waxana durba Mowqifkoodi isbadalay qaar ka mid ah ergadii la socotay Raisalwasaraha ee Kismaayo ku haray kuwaas oo ayagu hada Aminsan in Barre Hiiraale Hubkiisa usan ku wareejin Amisom hadi u ku wareejiyana hubkaasi lo gacan galin doono Axmed Madoobe.
Qaar ka mid ah Gudigiii Nabadeynta iyo wafdigii ka haray Raisalwasare Cabdiweli ayaa waxaa lagu wada in ay maalita bari ah ka dhoofan magaalada Kismaayo ayaga oo ka niyad jabsan qaabka ay wax u socdaan.
Isku so wada duubo waxaa la dhihi karaa Ciidamada ku sugan deeganka Gobweyn waxaay ka badbaaden dabin aad qatar u ahaa kaas oo lagu damacsana in hubkooda lagu wareejiyo Axmed Madoobe ayagana la kala diro. order Sublingual Viagra online cheap, clomid online.